साइकलले किचेको चल्ला बचाउन १० रुपैंया लिएर अस्पताल पुगेका बालकलाई विश्वभर कसले चिनायो ? – Rastriyapatrika
साइकलले किचेको चल्ला बचाउन १० रुपैंया लिएर अस्पताल पुगेका बालकलाई विश्वभर कसले चिनायो ?
एजेन्सी- भारत मिजोरम राज्यका एक बालक आफ्नो साइकलमा एक्लै खेल्दै थिए। खेल्दा खेल्दै उनको साइकलले दुर्घटनाबस छिमेकिको सानो चल्ला कीच्न पुग्यो । चल्ला कीचे पछाडि उनि निकै आत्तिए र चल्ला र आफूसँग भएको केहि पैसा सहित अस्पताल पुगे । अस्पताल पुगे लगतै पैसा लिएर चल्लाको उपचार गराउन डक्कटर संग आग्रह गरे ।
अस्पताल पुगेका सेहि बालकको तस्विर जब फेसबुकमा पोस्ट गरियो तर उनको तस्विर हजारौले मानिसले सेयर गरे। यदि साना बालकको यो कदमले भावुक भएको भन्दै हजारौं व्यक्तिले प्रतिक्रिया पनि जनाएका थिए । ती साना बालकको तस्बिर तस्बिर सोहि अस्पतालमा कार्यरत एकजना नर्सले खिचेको बताइएको छ।
त्यति साना ६ वर्षे बालक डेरेक सी लालछन हिमालेको त्यस्तो क्रियाकलापले निकै भावुक बनेका अस्पतालका चिकित्सकले चल्ला त बचाउन सकेनन तर चल्ला नबचेका कारण निकै भावुक हुदै एकजना नर्सले बालकको तस्बिर लिएर सामाजिक संजालमा शेयर गरेकी हुन। त्यस लगतै ती साना बालकको तस्बिर विश्वभर भाइरल भएको छ ।
तस्बिर भाइरलहुनुको कारण त्यहि कार्यरत अस्पतालकी नर्स थिइन । सर्वप्रथम उनको तस्बिर साङ्गा सेज’ नामक फेसबुक प्रयोगकर्ताबाट शेयर गरेका थिए ।